Topy maso momba ny diplaoma momba ny diplaoma izay manomana anao amin'ny asa »Hodges U
Sokajy: Ny zava-misy fotsiny
Safidio ny Hodges University ho an'ny programa momba ny diplaoma
Ny dingana voalohany dia matetika no sarotra indrindra raisina, koa andao hanomboka anio. Tsy fantatra hoe aiza no hanombohana? Ireto ambany ireto no ahitanao ireo antony tsy misy antony sy tsy misy fotony izay antony tokony hahatongavan'i Hodges ho oniversite mety aminao.
Tsy resy lahatra ny diplaoma amin'ny ho avy?
“Toy ny mpianatra Hodges maro dia nanomboka ny fianarako ambony amin'ny fianarako taty aoriana aho ary tsy maintsy nandanjalanja ny asa manontolo andro, ny fianakaviana ary ny oniversite. Izany no nahatonga an'i Hodges University hametraka ny filan'ny olon-dehibe miasa ho ivon'ny ezaka ataony hanampiana ny fampianarana ambony hivoatra, fa kosa namolavola paikady voaporofo hanampiana ny mpianatra hahomby amin'ny fiainana sy ny sekoly.
Miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny kilasy iray volana isam-bolana mandroso, daty fanombohan'ny fampianarana isam-bolana, ampiarahina amin'ny fihazakazahana Mazava ho azy fa miakatra hihaona amin'ilay mpianatra miverina antsasaky ny fandaharana henjana izay tsy mitaky fotoana fanaovana sorona ireo oniversite nentin-drazana. Ho fanampin'izany, ny maodelin'ny Core + 4 dia mamela ireo mpianatra nahavita ora roa 12, ary izay mahafeno fepetra, handray fampianarana 4 ora fanampiny isaky ny fotoam-pianarana.
Mino aho amin'ny fandaharam-potoana izay miasa mafy toa anao, ireo programa namboarina arakaraka ny filanao ao an-tsaina, sy ireo mpampianatra izay vonona hanolotra fanampiana rehefa tena ilainao izany. Amin'ny maha alumnus ahy, mpampianatra Hodges teo aloha, ary talen'ny manampahefana ambony teo aloha, nody aho mba hampandroso ny tanjon'ny Hodges University amin'ny fanohanana ny karazana mpianatra rehetra, satria mino anao sy ny hoavinao aho. ”
Dr. John Meyer, filohan'ny oniversite Hodges & Alumni (BS & MBA)
Fanampiana ara-batana mpanampy CAPTE Fampiofanana ekena.